म उसको घरमा गइनँ भने मेरो फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छु भनेर धम्क्याइरहन्छ -
म उसको घरमा गइनँ भने मेरो फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छु भनेर धम्क्याइरहन्छ
August 1, 2020 August 1, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on म उसको घरमा गइनँ भने मेरो फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छु भनेर धम्क्याइरहन्छ
म दुई वर्षको लिभिङ टुगेदर रिलेसनमा थिएँ। बस्दै गर्दा उसप्रति मेरो माया औधि बढेर गयो। त्यही भएर होला उसले भनेका हरेक कुरा म मान्थेँ।
म शारीरिक सम्बन्धको लागि तयार थिइनँ तर उसले मलाई सधैँ श्रीमान्–श्रीमती हौँ, बिहे पो नभएको त भन्दै सम्झाउँथ्यो। उसको कुरा हो जस्तो लागेर नाइँ भन्न सकिनँ र उसको कुरा मानेँ।
यतिबेला उसको धम्क्याइका कारण म एकदम तनाबमा छु। मेरा केही फोटोहरु उसले उदाहरणका रुपमा मेरा साथीहरुलाई पनि पठाएको छ। म ऊसँग फिजिकल हुन मानिनँ, उसलाई भेट्न गइनँ भनेर त्यस्तो गर्न मिल्छ त रु
दिलबाट मन पराएको मान्छेले केही कुरामा मतभेद भयो भन्दैमा मलाई यस्तो गर्ला भनेर सपनामा पनि सोचेकी थिइनँ। मलाई ऊ अहिले मन पर्दैन। मन परोस् पनि कसरी रु यस्तो हृदय भएको मानिसलाई मैले प्रेम गरेको पनि त होइन !
मेरा आमा–बाबाले मबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन्। एउटा पुरुषको धोकाका कारण म कसरी मेरा आमा–बाबालाई धोका दिऊँ रु मलाई यो समस्याबाट निस्कनका लागि सुझाव दिनुस् न ! सुक्रबारबाट
सोमबारसम्म भारी वर्षाको पूर्वानुमान
नक्कली रक्सी पिउँदा ३८ जनाको मृत्यु
संसदमा मिनेन्द्र रिजालको आक्रोशपूर्ण रोदन
आज १३ ‌औं गणतन्त्र दिवस, कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नहुने
गाउ फर्कनेहरुको लागि खुसीको खबर ! शुक्रबार र शनिबार खुल्यो गाडी
April 9, 2020 अखवार अनलाइन
टयाङकरले ठक्कर दिदा पैदलयात्रुको घटनास्थलमा नै मृत्यु्